Projet Utopia - Adihevitra momba ny olon-dehibe - andian-dahatsoratra vaovao, haingam-pandeha haingana, havaozina haingana - ManyToon - Read Comics Free Online
Salanisa 4.3 / 5 amin'ny vato 43 total.
12th, manana fijery isam-bolana 235.5K
Ireo mpampiasa 217 dia nanamarika ity
Lehilahy 12 sy vehivavy 12 nalaina an-keriny ary navela tany amin'ny nosy lavitra. Raha tafakatra eto amin'ity nosy ity izy ireo mandritra ny volana 10 dia nandresy $ 500,000 izy ireo. Ity no tantara aseho ny tena toetran'ny olombelona. Tongasoa eto amin'ny tetikasa Utopia.
Ny mpamaky dia vonona handoa vola isam-bolana amin'ny tranokala izay manome tantara an-tsary amin'ny webtoon. Ankoatra izany, miroborobo ihany koa ny tranokala famakiana tantara an-tsary maimaimpoana. Manytoon.com dia tranonkala iray. Manytoon.com dia mamela ny mpamaky hamaky tantara an-jatony maimaimpoana maimaimpoana. Manolotra tantara voaloa mifototra amin'ny famatsiam-bolan'ny vondron'olona ny tranokala. Ny tranokala dia manavao ny tranokala isan'andro ary manana tantara an-tsary ambony indrindra 300. Raha izay no tianao vakio ny tantara an-tserasera maimaimpoana, marobe fa maro no tsy handiso fanantenana anao.
Chapter 87 Janoary 6, 2020
Chapter 86 Desambra 29, 2019
Chapter 85 Desambra 26, 2019
Chapter 84 Desambra 19, 2019
Chapter 83 Desambra 11, 2019
Chapter 82 Desambra 1, 2019
Chapter 81 Novambra 23, 2019
Chapter 80 Novambra 23, 2019
Chapter 79 Novambra 12, 2019
Chapter 78 Novambra 6, 2019
Chapter 77 Novambra 6, 2019
Chapter 76 Novambra 6, 2019
Chapter 75 Oktobra 15, 2019
Chapter 74 Oktobra 11, 2019
Chapter 73 Septambra 29, 2019
Chapter 72 Septambra 29, 2019
Chapter 71 Septambra 17, 2019
Chapter 70 Septambra 17, 2019
Chapter 69 Septambra 4, 2019
Chapter 68 Septambra 2, 2019
Chapter 67 Septambra 2, 2019
Chapter 66 Septambra 2, 2019
Chapter 65 Septambra 2, 2019
Chapter 64 Septambra 2, 2019
Chapter 63 Septambra 2, 2019
Chapter 62 Septambra 2, 2019
Chapter 61 Septambra 2, 2019
Chapter 60 Septambra 2, 2019
Chapter 59 Septambra 2, 2019
Chapter 58 Jona 19, 2019
Chapter 57 Jona 6, 2019
Chapter 56 Jona 6, 2019
Chapter 55 Enga anie 29, 2019
Chapter 54 Enga anie 18, 2019
Chapter 53 Enga anie 18, 2019
Chapter 52 Enga anie 7, 2019
Chapter 51 Enga anie 1, 2019
Chapter 50 Aprily 21, 2019
Chapter 49 Aprily 11, 2019
Chapter 48 Aprily 4, 2019
Matetika ny 2d dia nijanona
Nandeha mode psycho feno i Nigga
yup… ary ny sociopath dia nahavoa akoho iray hafa.
dang, tiako ho tsara tarehy ny fifandraisan'izy ireo fa tsy haingana
Dude mihodina any anaty stalker miantso azy
Ny trano fizarana Manga Comic